बाबुराम-उपेन्द्रबीच एकताकाे अन्तिम तयारी : कहिले हुन्छ एकता घाेषणा ?
काठमाडौं, १७ वैशाख। नयाँशक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकताको तयारीले अन्तिम रुप लिएको हो। भित्रभित्रै अगाडि बढाइएको एकता वार्ताले सफलता पाउने नपाउने यसै हप्ता टुङ्गो लागिसक्ने जानकारी एकता वार्तामा सहभागी दुबै दलका नेताहरुले दिएका छन्।
अबको केहीदिन भित्र नै पार्टी एकता घोषणा गर्ने तयारी दुई पार्टीको छ। यादवले पार्टी एकताको अन्तिम तयारी गर्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका नेता मोहम्मद इस्तीयाक राईलाई दिएका छन् भने भट्टराईले गङ्गा श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
नेतृत्वका विषयमा यादव र भट्टराई दुवैले एकअर्कालाई सम्मान हुने गरी निर्णय लिएका छन्। पार्टी एकताका लागि छलफलमा जुटेका दुवै दलका दोस्रो तहका नेताले एकताको खाका यादव र भट्टराईलाई बुझाएका छन्।
अघिल्लो वर्ष भएको स्थानीय निर्वाचन लगत्तै सुरु भएको एकता प्रयासले सफलता नपाएपछि दुबै दल झण्डै साढे एक वर्ष एकताको सम्बन्धमा निस्क्रिय जस्तै थिए। तर, केही अघिदेखि फेरि एकताको प्रयास सुरु भएको र एकताका लागि पहिले भन्दा सकरात्मक स्थिति बन्दै गएको बताइएको छ।
Tagsनयाँशक्ति पार्टी पार्टी एकता संघीय समाजवादी फोरम